China Model No: Chinese rụpụta Akpaaka Control YDJ Series Hydraulic Scrap Metal shiee Baler Machine factory na suppliers | Jikọọ Top
Banyere Top Top
Mebiri emebi metal baler
Vetikal na-abụghị metal baler
Metal briquetting pịa igwe
Metal shiee igwe
agụ iyi metal shiee
oké ọrụ shiee igwe
metal baler shiee
Bale emebi igwe
Sale Na Ọrụ
Model No: Chinese rụpụta Automatic Control YDJ Series Hydraulic Scrap Metal shiee baler Machine
YDJ usoro scrap metal shiee baler igwe na-arụ ọrụ ụkpụrụ:
1. Shear usoro: bido moto ahụ nke mbụ, kpoo mmanụ mgbapụta ka ọ gbanwee mmanụ, wee zipụ ihe ahụ na ebe kwesịrị ekwesị. Pịa bọtịnụ shea, pịa cylinder ihe, na cylinder shear na-agakọ nke ọma iji ghọta ihe na ịpị na ịkwa osisi. Mgbe emechara akpacha ajị, onye na-ebu ngwá ọrụ na pịa laghachi na steeti mbụ maka ịnọ na njikere, na akpacha ajị mbụ agafeela.
2, ọnọdụ ọrụ: n'ihi ojiji nke mgba ọkụ njem ụzọ abụọ, enwere ike ịmị mkpụrụ akụ abụọ, akpaka mgbasa.
Karịrị 25+ afọ nke mmepụta mmepụta, na-enye ahaziri karịa 3000 + esetịpụrụ scrap metal imegharị ihe maka atụmatụ.
Hydraulic scrap metal shiee baler igwe nwere ezigbo uru maka ụlọ ọrụ mgbazigharị ígwè. N'oge a, ụkọ nke ihe ndị dịnụ bụ nsogbu mba ọ bụla na-eche ihu. N'agbanyeghị mba na-emepe emepe ma ọ bụ mba ndị mepere emepe, otu esi emegharị kachasị mma bụ isiokwu dị ọkụ. Ya mere, anyị na-echepụta ụdị igwe dị iche iche nke hydraulic scrap metal shear baler igwe maka ndị ahịa anyị iji mesoo ígwè ha kpochapụ iji mezuo ihe ndị ahịa anyị chọrọ.
A na-ejikarị igwe eji arụ ọrụ ụgbọ mmiri, nke a na-eji ya eme ihe maka ụdị ọkụ na ihe dị iche iche, mmepụta na nchara nchara ndụ, akụkụ ngwongwo ọkụ, ụdị plastik na-abụghị ígwè (igwe anaghị agba nchara, alloy alloy, copper, wdg) mkpakọ nkwakọ na akpacha ajị; Ma ọ bụ ihe mkpofu na-agbakọ nkwakọ ngwaahịa.
N'adịghị ka ndị na-ahụ maka igwe, igwe a na-akpụ akpụ hydraulic nke a nwere ike ịpị ma ịkpụcha ọla.
●Hydraulic drive, ezigbo ọrụ na enweghị mkpọtụ, ọsọ ọsọ extrusion, nnukwu ikike extrusion, ngọngọ kọmpat, ọ dịghị mfe ịgbasa.
● ịmụta ụkpụrụ ígwè efere na elu ịgbado ọkụ technology, n'ibu akụkụ bụ inogide, ala ọdịda ọnụego na ogologo ọrụ ndụ.
A-Enwere ike itinye usoro ihe mkpuchi iji melite ọrụ na-aga n'ihu nke akụrụngwa ma belata ọnụego ọdịda. Enwere ike kewaa usoro ihe jụrụ oyi n'ime mmiri jụrụ oyi na ikuku ikuku.
Seal Akara akara ahụ na-agbakwunye mgbanaka GRAI dị, nke nwere arụmọrụ akara nke ọma na nguzogide nrụgide siri ike.
● Easy echichi, obere akara ukwu, enweghị ntọala, ntọala, wdg Mfe ọrụ, kemwepu, akpaka mode.
Ext Oyi nke extrusion agbanweghi ngwongwo igwe ma me ka onu ogugu ya.
A-Coefficient dị elu karịa ọdịnala hama, nkwakọ ngwaahịa, wdg.
●PLC akpaka akara dị mfe iji rụọ ọrụ na ịnọgide na-enwe.
● Ngwa igwe haịdrọlik na-akpụ akpụ igwe nwere ike inyere gị aka ịchekwa ọrụ, melite mgbake igwe, bulie ọnụahịa ire ma melite uru.
Ọ nwere ike inyere gị aka ịchekwa ebe ọrụ, bara uru maka njikwa saịtị.
● Ndị ahịa nwere ike ịhazi nkọwa nkwakọ ngwaahịa na nha dịka mkpa ha maka njem ma ọ bụ nchekwa.
● Ọ ga - enyere gị aka belata ọnụego njem, bulie ọrụ gị nke ọma
1. Shear usoro: bido moto ahụ nke mbụ, kpoo mmanụ mgbapụta ka ọ gbanwee mmanụ, wee zipụ ihe ahụ na ebe kwesịrị ekwesị. Pịa bọtịnụ shea, pịa cylinder ihe, na cylinder shear na-agakọ nke ọma iji ghọta ihe na ịpị na ịkwa osisi. Mgbe akpacha ajị ahụ gasịrị, onye na-ebu ngwá ọrụ na pịa laghachi na steeti mbụ maka ịnọ na njikere, na akpacha ajị mbụ agafeela.
2. ọrụ mode: n'ihi na ojiji nke njem mgba ọkụ ụzọ abụọ ụzọ, abụọ shiee ọrịa strok nwere ike na-akpaghị aka jikọọ, akpaka mgbasa.
.Dị Max tingcha Force (Ton) Pịa igbe size (mm) Bale size (mm) Ogologo oge (oge / min) Ike (kw)
YDJ-4000 400 4000 × 1500 × 800 500 × 400 4-7 2 × 45
YDJ-5000 500 5000 × 2000 × 1000 600 × 500 4-7 3 × 45
YDJ-6300 630 6000 × 2200 × 1200 720 × 650 4-7 4 × 45
Ndị na-arụ ọrụ na-arụ ọrụ
Anyị Hydraulic Scrap Metal shiee Baler Machine na-enye omenala ama ika igwe akụkụ, anyị na e na-arụkọ ọrụ na ọtụtụ ụwa na-ama ika soplaya, dị ka SIEMENS, NOK OMRON, SCHNEIDER, CHINT, MITSUBISHI na na na ihe karịrị 10 afọ
Obere ihe atụ YDJ Series Hydraulic Scrap Metal shear Baler Machine nwere ike chebe nke ọma n'otu akpa 40 HQ. Ọ bụrụ na ụgbọ mmiri n'ụgbọ mmiri, anyị ga-ekpuchi poncho na Load oche iji kpuchido YDJ Series Hydraulic Scrap Metal shear Baler Machine.
Lelee Hydraulic Scrap Metal shear Baler Machine maka Igwe eji emegharị ihe na Action!
Nke gara aga: Model No: NY Series haịdrọlik na-ekpo ọkụ spinning igwe
Osote: Model No: Chinese rụpụta Manual Control Y82 Series Vetikal Hydraulic na-abụghị metal Press Baler Machine
Alligator shiee Machine
Hc43-1600 Alligator shiee Machine
Hydraulic Alligator Scrap Shear Machine
Metal Powder Briquette Machine, Mpempe akwụkwọ Metal Baler, Ọla kọpa Scrap Baler, Hydraulic Baler / Aluminium Nwere Ike Press Machine, Kwụ Baler Aluminium Scrap Press Machine, Agụba Shear Maka Mobile Digger,